Hello Nepal News » मेस्सीको यस्तो रेकर्ड, जुन पत्याउनै मुस्किल पर्छ !
मेस्सीको यस्तो रेकर्ड, जुन पत्याउनै मुस्किल पर्छ !
एजेन्सी, कात्तिक २४
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा गत राति बार्सिलोनाले सेल्टा भिगोलाई आफ्नो घरमा ४–१ ले हरायो । घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा भएको खेलमा बार्सिलोनालाई जिताउन कप्तान लिओनल मेस्सीले दुई फ्रि किक गोलसहित शानदार ह्याट्रिक गरे । मेस्सीले पहिलो हाफमा पेनाल्टीमार्फत् १ गोल गर्दा २ गोल फ्रि किकमार्फत् गरे ।
मेस्सीले एकै खेलमा गरेका दुई शानदार फ्रि किक गोलको चर्चा र तारिफ समर्थकहरूले अहिले खुलेर गरिरहेका छन् । गत रातिका २ गोलसँगै मेस्सीले यो सिजन ला लिगामा कूल ८ गोल गर्दा फ्रि किकबाट मात्रै ३ गोल गरिसकेका छन् ।
रियल मड्रिडको भन्दा पाँच गुणा बढी गोल !
गत रातिका २ फ्रि किक गोलसँगै मेस्सीले आफ्नो कट्टर प्रतिस्पर्धी क्लब रियल मड्रिडविरुद्ध शानदार तथ्यांक बनाएका छन् । पछिल्ला तीन सिजन ला लिगामा रियल सिंगै टिम (सबै खेलाडी) ले जम्मा ३ गोल मात्रै सोझै फ्रि किकबाट गरेको छ । औसतमा रियल सिंगै टिमले एक सिजनमा १ मात्रै फ्रि किक गोल गरेको छ ।
तर, सोही अवधिमा मेस्सी एक्लैले ला लिगामा कूल १६ फ्रि किक गोल गरेका छन्, जुन रियलको भन्दा १३ गोलले बढी हो । अर्थात् अंकगणितबाट हेर्दा यो पाँच गुणा बढी हो । यो निकै शानदार रेकर्ड हो ।
पछिल्ला वर्ष चमत्कारिक फ्रि किक गोलहरू गरेर सनसनी मच्चाउँदै आएका मेस्सीले गत सिजन ७ गोल फ्रि किकबाट गरेका थिए, जुन उनले कुनै पनि सिंगल सिजनमा गरेको सर्वाधिक बढी फ्रि किक गोल थियो ।
प्रकाशित मिति २४ कार्तिक २०७६, आईतवार ०४:३२